Umsebenzi oyinhloko mixer iwukuba uhlanganise bamanzi ashisayo nabandayo. Ngu choice yakhe kufanele ithathwe ngendlela wemfanelo omkhulu, ngoba kumele high quality, kube lula ukuyisebenzisa, okuthembekile, ukusebenza, futhi isikhathi eside. Kubalulekile ukunaka izinto kusuka kulo yakhiwa, futhi idizayini, ukuze kwakuvumelana izakhiwo ingaphakathi.
Namuhla, emakethe imikhiqizo sanitary kuyinto ezihlukahlukene labathaki bamafutha, ngamunye ephethe ezithile izakhiwo, emihle nemibi.
Labathaki bamafutha "Lemark"
Lokhu amapayipi e emakethe yethu esanda kutholakala, kodwa kakade wakwazi ukunqoba nokwethenjwa ngamakhasimende. Imikhiqizo brand LEMARK ekhiqizwa eCzech Republic, embonini ngasemzini Brno. Labathaki bamafutha "Lemark" - emnothweni inketho ephelele, okuhloswe ngaso abathengi nge lengenako ezahlukene. Ngo ayatholakala emakhemisi njengoba onobuhle ephansi ekupheleni, nempahla ebizayo.
Umumo labathaki bamafutha "Lemark" nezinye izinsimbi zabo ziklanyelwe ukuhlangabezana zonke izidingo izakhamuzi zethu nabo. Lesi sitshalo ukhiqiza inhlangano yokugcina futhi azinabo ukulawula izinga. Ngaphambi ukupakisha labathaki bamafutha lwahlolwa ukuze ukusebenza kanye yobunzima izici zokusebenza. Izibuyekezo Customer ngazo zimane ngomdlandla.
Indlela ukukhetha isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Lemark?
Mixer "Lemark" angathengwa nganoma iyiphi injongo. Ngakho, onobuhle jikelele ayatholakala ukuthi zifanelekile ngokwezinhloso eshaweni, futhi lokukhuphula obondeni eduze okugeza noma ngqo ebhodini okugeza. Kukhona amamodeli ukusetshenziswa ekhishini (banalo ukugoba enkulu itjhubhu futhi ziyehluka ngobude), egumbini lokugezela ukugeza nemicengezi bidets.
Labathaki bamafutha "Lemark" ayatholakala nge swivel ikhanda izingxenye zokukhiqiza iSpanishi, kanye igobolondo sobumba. Ngayinye yalezi ezahlukeneyo ukuhlangabezana ngokugcwele ephezulu kanye nokusebenza nokwethenjelwa. Ukuba khona ifaka epulasitiki izibambo noma ompompi ukuvimbela ingozi ukubanjwa ashisiwe ngesikhathi usebenzisa mixer. Esinokwethenjelwa uxhumano nezimo ivikela endlini kusukela ukuvuza, kodwa ngenxa yezingxenye obandayo ukufakwa mixer kungenziwa kalula.
Izici Lemark labathaki bamafutha
Labathaki bamafutha "Lemark" ezingabizi futhi akhiwe kuhambisana nazo zonke izimfuneko zohlelo eziyisisekelo ukulawula izinga uhlelo, ihlolwe ukuze isebenze futhi yobunzima of imishini izingxenye. Ukuze ukusetshenziswa elula kuzo zonke ezahlukeneyo umkhiqizo anemisila itjhubhu swivel. ihlolwe kuphela nephephile izinto empilweni yomuntu ezisetshenziswa ukukhiqizwa Lemark labathaki bamafutha.
Namuhla, imikhiqizo sanitary emakethe linikeza eziningi ongakhetha labathaki bamafutha ukuthi mahle zonke izidingo zokunikwa, kodwa sanitary ware brand Lemark kuyinto bayindlala kakhulu. Lena ngenxa yezizathu eziningi, ezinye zazo, njengoba kwaphawula u-abathengi, kukhona eliphezulu futhi ephansi impela imikhiqizo umenzi.
Plumbing "Lemark" esikalini abathengi eziningi ezifuywayo, ngoba eziningi ezicini ezinhle esobala:
Ukusetshenziswa high quality materials. Labathaki bamafutha "Lemark" wenza zethusi, ukumelana imithwalo esindayo ephephile nempilo yabantu, noma insimbi engagqwali. Ngenxa a enamathela ekhethekile ngalezi izinto amelana kumiswa limestone imali kanye ukugqwala. Futhi uzinake is izinqubo zangaphakathi zakhiwe zobumba, okubenza babe eqinile futhi ethembekile.
imikhiqizo Design zikanokusho. "Lemark" niqinile labathaki bamafutha linebanga enkulu design zangaphandle elikuvumela ukuba ukhethe inketho ngaphansi kwanoma yisiphi isitayela wezangaphakathi.
A isiqinisekiso izinga. Isiqinisekiso isikhathi - kuze iminyaka 5.
imishini Excellent, kusiza ukusetshenziswa mixer futhi usinika ukuphila komkhiqizo.
Ishintsha 3 izinhlobo: push-inkinobho, ngesandla futhi ome njengeqanda.
intengo imali. Naphezu kokuhlaselwa okukhulu eliphezulu kakhulu izinga labathaki bamafutha, umenzi uye walungiselela ukubaluleka ngempela yeningi imikhiqizo yabo (kusuka 50 ngesikhathi. E. Ngoba valve).
Labathaki bamafutha "Lemark", okuyinto libuyekeza amaningi, uquketheni lowo sibonga umkhiqizo kuphela omuhle, sihlanganise idizayini enhle, eliphezulu futhi ukuhlangabezana zonke izidingo abathengi yesimanje.
Le nkampani inikeza zonke izinhlobo ezikhona emhlabeni imikhiqizo efanayo. Labathaki bamafutha yafuna kakhulu "Lemark" eshaweni, ikhishi, bidet, ezithinta umklamo onhlobonhlobo: ezimbili kanye imodeli odnoruchkovye; nge funktsinalnoy Lake itjhubhu for ekhishini, ifakwe liner nezimo, okuyinto ekahle kakhulu ukugeza izitsha kanye nemifino. Kuba yisikhathi futhi lapho anhlobonhlobo ompompi ngoba okugeza kanye eshaweni. Yonke imikhiqizo ayatholakala amaqoqo ahlukahlukene, babeqoqana ngokuvumelana imisebenzi, tesakhiwo kanye nomklamo.
injongo yabo eyinhloko - ukunikeza ukhululekile ukuwasha izitsha, izithelo nemifino. Ukuphakama itjhubhu kampompi kumele kwanele ukuba isifundazwe beka pan ngaphansi phezulu.
Ikhishi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu "Lemark" - ikhambi ephelele Interiors. Lokhu amapayipi inedizayini wesimanje. Lapha, kukhona onobuhle nezinhlobo ezihlukahlukene itjhubhu nokulawula emizimbeni. Amamodeli ziyatholakala nge valve futhi isigwedlo ukuxuba amanzi elikuvumela ukuba ukhethe noma iyiphi cuisine inketho efanelekayo. Ngokusho izibuyekezo zamakhasimende, imikhiqizo zinezikhathi eliphezulu. Ayikho intengo ngaphansi okuthokozisa eyamukelekayo.
Lesikahle for a okugeza
Mixer "Lemark" okwesikhathi okugeza ingakhethwa yimiphi isitayela ekhethiwe egumbini. brand Okubukwe inikeza ezihlukahlukene ngokuya imodeli yokukhipha.
Abathandi bendabuko ware sanitary inikeza iqoqo ejwayelekile labathaki bamafutha ongakhetha ukukhweza ebhodini okugeza noma udonga. Lokhu imishini libhekene ngokulawula uhlobo ukuma itjhubhu. Itholakala ayinakushintshwa futhi swivel itjhubhu, nge valve futhi isigwedlo ukuxuba amanzi.
Ukuze amakamelo yesimanje sanitary labathaki bamafutha etholakalayo onobuhle linamathele uhlangothi okugeza noma udonga. imiklamo zivumela bonke kakhulu ukufihla emehlweni. uhlelo Embedded, ungakhetha hhayi kuphela okugeza, kodwa futhi ngoba umphefumulo. Kuyaphawuleka lalihlehliswa isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu echibini "Lemark" okuyinto ingatholakala amaqoqo akubona bonke abakhiqizi amapayipi ngezinye izikhathi.
Le nkampani inyathelisa amamodeli we ompompi for yokugezela, lapho amanzi kuhlangana wenziwa yi-thermostat esakhelwe ngaphakathi. Lolu hlelo wenza kuhlangana othomathikhi nokondla uketshezi lokushisa elilungile. Kwimodi manual, udinga ukumisa kuphela ukushuba jet.
Kulabo abathanda umklamo ingaphakathi okungavamile, ukuqoqwa lungatholwa imodeli mixer nge design phansi. Lokhu amapayipi is kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe i-thini obukhethekile imishini ababezibheka imishini indawo.
Fans of the zabuna kwekhulu elidlule aqonde kweqiniso imodeli Lemark labathaki bamafutha, wenza i style nenhle Antique. Lokhu imishini sanitary okwethulwa imibala esezingeni isikhathi. Kukhona izihloko ngegolide nezitsha zethusi. Letinhlobo lezi labathaki bamafutha uvumele yokugezela ukukhipha e isitayela i esidlule ahlukile.
Inkatho ubhavu yensimbi. Izibuyekezo Zomsebenzisi kanye imibono lochwepheshe